IBen Rafoth yeziFundo zoPhando-uMbutho wamaZiko aBhalayo weHlabathi
NgoJanuwari 15 noJulayi 15 ngonyaka ngamnye.
Umbutho wamaZiko aBhalayo weHlabathi usebenza ukomeleza indawo yeziko lokubhala kuyo yonke imisebenzi yayo. Umbutho ubonelela nge-IWCA Ben Rafoth yezifundo zoPhando ngeGrant ukukhuthaza uphuhliso lolwazi olutsha kunye nokusetyenziswa kwezinto ezintsha zethiyori ezikhoyo kunye neendlela. Esi sibonelelo, esasekwa ngumbhali weziko lokubhala kunye nelungu le-IWCA uBen Rafoth, sixhasa iiprojekthi zophando ezinxulunyaniswa nethisisi yethisisi okanye isidanga sobugqirha. Ngelixa inkxaso-mali yokuhamba ingeyona njongo iphambili yale granti, siye sakuxhasa ukuhamba njengenxalenye yemisebenzi ethile yophando (umz. Ukuhamba kwiindawo ezithile, amathala eencwadi okanye uvimba ukwenza uphando). Le ngxowa-mali ayenzelwanga ukuxhasa uhambo lwenkomfa kuphela; endaweni yoko uhambo kufuneka lube yinxalenye yenkqubo yophando enkulu echaziweyo kwisicelo sesibonelelo.
Abafakizicelo banokufaka isicelo ukuya kuthi ga kwi-1000. (QAPHELA: IWCA inelungelo lokuguqula isixa sebhaso.)
Izicelo kufuneka zingeniswe kwi IPortal yobulungu be-IWCA ngomhla omiselweyo. Abafakizicelo kufuneka babe ngamalungu e-IWCA. Ipakethi yesicelo inezinto zilandelayo:
Ileta yokufaka ibhekiswe kusihlalo wangoku weKomiti yeziBonelelo zoPhando ethengisa ikomiti ngezibonelelo eziya kuthathwa ngenxa yenkxaso yezemali. Ngokukodwa, kufuneka:
Cela uqwalaselo lwe-IWCA lwesicelo.
Yazisa umenzi-sicelo kunye neprojekthi.
Faka ubungqina beBhodi yoPhando yeZiko (i-IRB) okanye enye imvume yebhodi yokuziphatha. Ukuba awuhambelani neziko elinenkqubo enjalo, nceda ufikelele kwi-Grants kunye ne-Sihlalo we-Awards ukuze ufumane isikhokelo.
Chaza indlela eziza kusetyenziswa ngayo iimali zesibonelelo (izixhobo, inkqubo yophando yokuhamba, ukufotokopa, ukuposa, njlnjl.).
Isishwankathelo seProjekthi: Isishwankathelo sephepha eli-1-3 leprojekthi ecetywayo, imibuzo yophando kunye neenjongo, iindlela, ishedyuli, imeko yangoku, njl njl. Beka iprojekthi ngaphakathi koncwadi olufanelekileyo nolukhoyo.
Okulindelweyo ngabawongwa ngembasa
Yamkela inkxaso ye-IWCA kuyo nayiphi na inkcazo okanye ukupapashwa kweziphumo zophando
Phambili kwi-IWCA, ukhathalelo kasihlalo weKomiti yeziBonelelo zoPhando, iikopi zopapasho okanye intetho
Fayila ingxelo yenkqubela phambili kwi-IWCA, phantsi kosihlalo weKomiti yeziBonelelo zoPhando, ngenxa yeenyanga ezilishumi elinambini zokufumana iimali zesibonelelo. Ukugqitywa kweprojekthi, ngenisa ingxelo yokugqibela yeprojekthi kwiBhodi ye-IWCA, phantsi kosihlalo weKomiti yezibonelelo zophando
Khawuqwalasele ngamandla ukungenisa umbhalo-ngqangi osekwe kuphando oluxhaswayo kwenye yeempapasho ezinxulumene ne-IWCA, iWLN: Ijenali yeZiko lokuBhala leScholarship, iZiko lokuBhala leJenali, uPhononongo loontanga, okanye iZiko loPapasho lwaMazwe ngaMazwe loMbutho. Zimisele ukusebenza nabahleli (aba) kunye nabavavanyi (m) ukuhlaziya imibhalo ebhaliweyo ukuze ipapashwe.
IKomiti yeZibonelelo inkqubo
Imihla emiselweyo yezindululo nguJanuwari 15 noJulayi 15. Emva komhla ngamnye obekiweyo, usihlalo weKomiti yeZibonelelo zoPhando uya kuthumela iikopi zepakethi epheleleyo kumalungu ekomiti ukuze ayiqwalasele, axoxe ngayo kwaye avote. Abafakizicelo banokulindela isaziso seeveki ezi-4 ukuya kwezi-6 emva kokufumana izixhobo zokusebenza
Ngolwazi oluthe kratya okanye imibuzo, qhagamshelana nosihlalo wangoku weKomiti yeZibonelelo zoPhando, uKatrina Bell, kbell@coloradocollege.edu.
2021: UMarina Ellis, “Iindlela Zabafundi Abathetha ISipanishi NaBahlohli Ngokufunda UkuFunda Nokubhala Nempembelelo Yezimo Zabo Kwiinkqubo Zokufundisa”
2020: UDan Zhang, "Ukwandisa iNtetho: Unxibelelwano oluqulathiweyo kwiiTutorials zokubhala" kunye UCristina Savarese, "Ukusetyenziswa kweZiko lokuBhala kwabaFundi beKholeji yoLuntu"
2019: UAna Cairney, KwiYunivesithi yaseSt John, "iArhente yeZiko lokuBhala: iPharadigm yoHlelo yokuXhasa abaBhali abaPhambili"; UJo Franklin, "Izifundo zokuBhala zaMazwe ngaMazwe: Ukuqonda amaziko kunye noMsebenzi weZiko ngokusebenzisa iiNdaba zokuKhangela"; kwaye UYvonne Lee, "Ukubhalela kwiNgcali: Indima yeZiko lokuBhala kuPhuhliso lwaBabhali abaphumeleleyo"
Ngo-2018: UMnditsho uHaen, KwiDyunivesithi yaseWisconsin-Madison, “Ukuziqhelanisa, iiNjongo zaBafundisi, iiNjongo kunye neeNgcaciso eziSetyenziswayo: Ukuphendula kumaNqaku aNgekho mhle aBabhali, iimvakalelo kunye nesimo sengqondo kwintetho yesifundo”; UTalisha Haltiwanger Morrison, KwiDyunivesithi yasePurdue, "Ubomi obuMnyama, iZithuba eziMhlophe: Ngasekuqondeni amava aBafundi abaNtsundu kumaZiko aMhlophe ikakhulu"; UBruce Kovanen" kwaye IBhete Towle, KwiYunivesithi yasePurdue, "Ukusebenzisana ngokuGxeka: Ukuqonda amaNkcubeko okuBhala kwamaZiko ngoFundo lobuGcisa beNkqubo yokuBhala yeZiko lokuBhala ubuDlelwane kwiiKholeji zoBugcisa eziNcinci."
2016: UNancy Alvarez, "Ukufundisa ngelixa uLatina: Ukwenza iSithuba seNuestras Voces kwiZiko lokuBhala"
2015: URebecca Hallman kuphando lwakhe ngokubhala kubambiswano lweziko kunye noqeqesho kwiikhampasi.
2014: UMateyu Moberly "kuvavanyo olukhulu lwabalawuli beziko lokubhala [eliya kuthi] linike icandelo umbono wendlela abalawuli kwilizwe liphela abaphendula ngayo ikhwelo lokuvavanya."
2008 *: IBhete Godbee, "Abahlohli njengaBaphandi, uPhando njengoMsebenzi" (thaca kwi-IWCA / NCPTW eLas Vegas, w / Christine Cozzens, Tanya Cochran, naseLessa Spitzer)
* IBen Rafoth Graduate Research Grant yaziswa ngo-2008 njengesibonelelo sokuhamba. Ayikhange iphinde inikezelwe kude kube ngu-2014, xa i-IWCA ithathe indawo ngokusesikweni "yeSibonelelo soPhando ngeZidanga" nge "Ben Rafoth Graduate Research Grant. Ngelo xesha, isixa semali esonyusiweyo sanyuswa saya kwi- $ 750 kwaye isibonelelo sandiswa ukuze sihlawule iindleko ezingaphaya kohambo.